Isugeynta Difaaca Isaga ...
Guud ahaan Badbaadinta
La tuuro kareemka caafimaadka ...
Tilmaamaha Isticmaalka Magaca Waxsoosaarka Difaaca Difaaca: Qaabka Guud ee Ilaalinta / Qeexida Qaabka Moodalka: Hal-gabal guud, Tilmaamaha Guud ee Laba-Cad: 160 (S), 165 (M), 170 (L), 175 (XL), 180 (XXL ) Qaab dhismeedka Qaab-dhismeedka badeecadani waxay leedahay laba nooc: mid guud iyo laba qaybood oo wadar ah, oo ka kooban dabool, dhar iyo surwaal, oo leh suuf laalaab ah, anqaw, dabool iyo dhexda, oo lagu tolay jiinyeer is-qufulka hore ah. Shayga waa mid aan nadiif ahayn, la tuuri karo oo lagu tolay filimka PE ee isku dhafan ...
Tilmaamaha Isticmaalka Gooni Goynta Gooni ahaanta Magaca Magaca: SUREZEN Model / Specifications MADALKA: SZ400 Midab buluug ah, qaab beddelid ah. Tilmaamaha: S, M, L Qaab dhismeedka Qaab dhismeedka: Shayga ma nadiifsana, waa la tuurayaa waxaana lagu tolay 43% filimka SMS (15gms) oo isku dhafan 57% dhar aan tolmo lahayn (20gms). 1. Muuqaalka: muuqaalka guud ee guud waa inuu ahaadaa mid qallalan, nadiif ah oo aan lahayn caariyaysi. Looma oggola dhejis, dillaac, dalool iyo cilado kale dusha sare. Tolmada ...
Isugeynta Guud ee Cajaladda Kuleylka-daboolida
Tilmaamaha Isticmaalka Guud ahaan ilaalinta ee cajaladda ku-daboolida kuleylka Magaca Badeecadda: Isku-darka guud ee cajaladda kuleylka kuleylka Qaabka / Noocyada Qaabeynta: Qeexitaannada Guud ee Hal-xabbo: 165 (M), 170 (L), 175 (XL), 180 (XXL) ) Qaab dhismeedka Qaab-dhismeedka badeecadani waa isku-wada-mid, oo ka kooban huud, surwaal dhar ah, iyo dabool kabo leh koofiyad jilicsan, anqaw, dabool iyo dhexda, oo lagu tolay jiinyeer is-qufulka hore. Xargaha waa in lagu xiraa cajalad kuleylka lagu daboolayo. Shayga waa la tuuri karaa ...
Dharka Maqaatiga ah ee Anti
Alaabtayadu waxay ka kooban tahay deeqsinimo, qolka fadhiga ee laabta & garbaha, dhexda laastikada ah ee loogu talagalay raaxada aan caadiga ahayn, Dharkaan ka hortagga ah waxaa loo dhisay waxtar, hufnaan & daryeel fudud, iyadoo aan loo eegayn sida ay u dufan yihiin ama u xun yihiin shaqada. Mawjada poly-suufka waara ee neefsanaya ayaa iska caabiya, sii luminta, laalaabka & nabarrada. Waxaan sameynaa funaanado anti-static, jaakadaha ka soo horjeedka ma guurtada ah, dharka xilliga qaboobaha ee ka soo horjeedka ma guurtada ah ee alaabada kale ee ay isticmaalaan shirkad petrochemical
Badeecadani waxay qaadatay seddex lakab sifeyn. Nidaamyada wax soo saarka ugu muhiimsan waxaa ka mid ah dhalaalka la afuufayo, lafdhabarta, hawo kulul ama irbadda oo la feerayo, iwm. Shahaadooyin dhameystiran, badeecadaha waa la damaanad qaaday, marada meltblown miiraha leh ee seddex lakab + heerka ilaalinta dharka aan tolneyn ayaa sarreeya, shaqada iyo iskuulka ayaa aadaya, had iyo jeer waardiye, qaab xagaaga gaar ah, iftiin iyo neefsasho, Ku habboon wajiga, ma furmayo, iska caabin hoose , ma haayo neefta, xargaha dhegaha oo balaastik ah oo fidsan, oo raaxo leh in la xidho oo ha dhegaysan dhegaha.
Maaskarada N95 waa mid ka mid ah sagaal waji-waji oo ilaaliya shahaado ay caddeysay NIOSH. "N" macnaheedu waa adkaysi la'aan saliida. "95" waxaa loola jeedaa marka la soo bandhigo tiro cayiman oo ah qaybo gaar ah oo tijaabo ah, isku-soo-ururinta walxaha ku dhex jira maaskarada ayaa in ka badan 95% ka hooseysa isku-uruurinta walxaha ka baxsan maaskaro. Qiimaha 95% ma ahan celcelis ahaan, laakiin waa midka ugu yar. N95 ma aha magac badeecad gaar ah. Ilaa iyo inta ay ka soo baxayso heerka N95 oo ay ka gudbayso dib u eegista NIOSH, waxaa loogu yeeri karaa "N95 mask". Heerka ilaalinta ee N95 waxaa loola jeedaa iyadoo lagu jiro xaaladaha baaritaanka ee lagu qeexay heerka NIOSH, waxtarka shaandhaynta maaddada maaskarada ee walxaha aan saliida lahayn (sida boodhka, ceeryaanta aashitada, ceeryaanta rinjiga, noolaha, iwm.) Waxay gaaraysaa 95%.
Maaskarada ka hortagga caafimaadku waxay ku habboon yihiin ilaalinta shaqaalaha caafimaadka iyo shaqaalaha la xiriira ee ka hortagga cudurrada faafa ee hawo-mareenka. Waa nooc isdaba-marinta is-shaandhaynta qalabka ilaalinta caafimaadka ee leh heer sare oo ilaalin ah, gaar ahaan ku habboon soo-gaadhista hawada inta lagu jiro baadhitaanka iyo waxqabadka daaweynta Ama marka ay xidhaan bukaanada qaba infekshannada neefsashada ee ay ku faafaan dhibcaha meel u dhow, heerkan maaskaro ayaa shaandhayn kara qaybaha hawada ku jira oo xannibi kara wasakhda sida dhibcaha, dhiigga, dareeraha jidhka, iyo dheecaanka. Waxtarka sifeynta ee walxaha aan saliida lahayn waxay gaari karaan 95 Above% waxay gaareysaa heerka N95, taas oo ah qalab ilaalin shaqsi ahaaneed oo badanaa loo isticmaalo cudurada hawada. Waxay ku habboontahay wejiga wejiga wejiga waana shey mar keliya la isticmaalo. Maaskarada ka hortagga caafimaadku waxay ka hortagi karaan inta badan cudurrada keena sida bakteeriyada iyo fayrasyada. WHO waxay ku talineysaa in shaqaalaha caafimaadku ay u isticmaalaan waji-ka-ilaalin waxyaabaha ka hortaga si looga hortago infekshinka fayraska ee isbitaalka.
Maaskarada caafimaad ee la tuuri karo ayaa loo isticmaalaa in lagu buufiyo buufinta ka soo baxda daloolka afka iyo sanka, waxaana loo isticmaali karaa daryeelka nadaafadda ee la tuuri karo ee ku jira bey'adaha caafimaad ee caadiga ah. Waxay ku habboon tahay howlaha guud ee daryeelka caafimaadka, sida nadaafadda nadaafadda, diyaarinta dareeraha, gogosha sariirta, iwm.
Shaygaani wuxuu adeegsadaa miiraha saddexda lakab, kaas oo si wax ku ool ah u kala sooci kara walxaha bakteeriyada ah adigoon neeftaada haynin isla markaana si wax ku ool ah uga hortagi kara qiiqa, manka, iyo siigada Shahaadooyin dhameystiran, badeecadaha waa la damaanad qaaday, marada meltblown miiraha leh ee seddex lakab + heerka ilaalinta dharka aan tolneyn ayaa sarreeya, shaqada iyo iskuulka ayaa aadaya, had iyo jeer waardiye, qaab xagaaga gaar ah, iftiin iyo neefsasho, Ku habboon wajiga, ma furmayo, iska caabin hoose , ma haayo neefta, xargaha dhegaha oo balaastik ah oo fidsan, oo raaxo leh in la xidho oo ha dhegaysan dhegaha.
Tilmaamaha Isticmaalka Go'itaanka Go'itaanka Kabaha Kabaha Go'aanka Magaca Badeecada: Qaabka Kabaha Go'itaanka Kabaha Goynta Moodalka / Qeexitaanka Qaababka: Nooca Caadiga ah (Seams aan lahayn kuleylka kuleylka kuleylka), Nooca Cajaladda Heat-qufulka (Seams with tape-sealing tape). Qaab dhismeedka waxsoosaarka Sheygu waa mid aan nadiif ahayn, la tuuri karo laguna tolay filimka 'PE film composite non-toven to fabric' (waxyaabaha ugu muhiimsan). Nooca Cajaladda Heat-Sealing, xargaha ayaa lagu xirayaa cajalad kuleylinta kuleylka ah, waxay leedahay awood sare iyo waxqabadka caqabadda. Wax soo saarka P ...